Deg: Deg: Madaxweyne Trump oo Hada Hadlay iyo wuxuu ka sheegay Doorashada in laga badiyey. - KALA SOCO - Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. | KALA SOCO – Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
November 7, 2020 8:49 PM - Written by Warbaahinta AlloolNews
Madaxweyne Trump ayaa ka daba hadlay wararka kasoo yeedhay Warbaahinta Mareykanka. Kuwaas oo Shaaciyey in Musharax Biden Badiyey Doorashadii ayuu Madaxweyne Trump ku tilmaamay kuwo aan Ogayn meel leysla marayo.
Wuxuuna sheegay in uu todobaadkan soo socda bilaabo doono kiis maxkamadeed, isago ku hanjabay in aan doorashadan laga badin ee uu dadka waxaas ku hadlaya indhahooda wax tusi doono.